Warshadaha Kiisaska Taleefanka Shiinaha Silicone | SJJ
Kiisaska taleefoonka silikoonku waa naqshado cajiib ah si aad taleefannadaada uga ilaaliso xoqidda, boodhka, naxdinta iyo faraha. Waxaa loo isticmaali karaa waqti dheer sababtoo ah xooggeeda iyo raagaya. Cabbirrada waxaa had iyo jeer loo sameeyaa inay ku habboon yihiin dhammaan moodooyinka sumcadaha taleefannada caanka ah, halka qaababka iyo midabada laga beddeli karo wi ...
Kiisaska taleefoonka silikoonku waa naqshado cajiib ah si aad taleefannadaada uga ilaaliso xoqidda, boodhka, naxdinta iyo faraha. Waxaa loo isticmaali karaa waqti dheer sababtoo ah xooggeeda iyo raagaya. Cabbirrada waxaa had iyo jeer loo sameeyaa inay ku habboon yihiin dhammaan moodooyinka sumcadda taleefannada caanka ah, halka qaababka iyo midabada lagu hagaajin karo astaamo kala duwan sida waafaqsan shuruudahaaga. Aad bay u dhalaalaysaa oo ugu faraxsan tahay inaad isticmaasho taleefan leh sawirrada ama naqshadaha aad jeceshahay. Naqshadaha midabada leh iyo astaamaha ayaa taleefankaaga ka dhiga mid aad u qurux badan oo soo jiidasho leh. Shirkadaha sumadda leh, waa fikrad aad u fiican in lagu xayeysiiyo sumadahaaga iyo fikradahaaga iyada oo la adeegsanayo kiisaska taleefanka silikoon ee qiime jaban.
Cabbirka: Cabbirrada dib loo habeeyay waxay ku habboon yihiin cabbirka taleefanka sumadda leh, cabbirka dibadda iyo qaababka ayaa ah
Midabada: Waxay la jaanqaadi kartaa midabada PMS, wareegga, qeybta, dhalaalka-mugdiga, midabada ku habboon
Logos: Logos waa la daabici karaa, waa la xardhi karaa, waa la dejin karaa, khad-ku xiran, Laser ayaa xardhan
Lifaaq: Raac tilmaamahaaga
Hore: Kuwo kale
Xiga: Silsilado Keychains
Kiiska Telefoonka Silikoon
Dhimashada biinanka Zinc Alloy Musmaarradii